လူတွေအပြောများနေတဲ့ content marketing ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ?
တကယ်တော့ content marketing ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ marketing တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်. .. အရင်ဆုံး သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကို အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်..
Content Marketing ဆိုတာ ကိုယ် target ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေ ကိုယ့်ရဲ့ product ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ Service ကို သုံးစွဲဖို့အတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ contents တွေကို ဖန်တီးပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့ဆီရောက်အောင် channels မျိုးစုံ ( ဒီနိင်ငံမှာတော့ အထူးသဖြင့် Facebook )ကိုအသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ contents တွေကို publish လုပ်ခြင်း အနုပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် contents marketing ဆိုတာ လွယ်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အမြဲတမ်း creative ဖြစ်နေတဲ့ contents တွေရဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. တစ်ချို့ကျတော့ creative ဖြစ်အောင် အရမ်း hot ဖြစ်တဲ့ trend တွေနောက်ကို လိုက်ကြတယ်.. Trend နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ creative ဖြစ်တဲ့ contentsမျိုးတွေရနိုင်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ business အတွက် မကောင်းတာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…
အခုနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့ business အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် content marketing လုပ်တာမျိုးတွေရှိသလို ရင်းနှီးငွေ နည်းနည်းနဲ့ လုပ်ငန်းစချင်တဲ့သူတွေကလည်း business တွေအတွက် contents တွေကို creative လုပ်ပေးပြီး page, website မှာ publish လုပ်ပေးတဲ့ agency တွေအဖြစ် စတဲ့ content marketing ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်.. ဒီတော့ နောက် section မှာ content marketing ကို ကိုယ့် business အတွက် လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ရော သူများအတွက် contents တွေကို ဖန်တီးပေးနေတဲ့ agency အဖြစ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ရော content marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်လဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်…
၁. ကိုယ်ရဲ့ products တွေကိုအတင်းရောင်းတဲ့ contents တွေမဟုတ်ပဲ ဒီအတိုင်းလေးပဲ products အကြောင်း services အကြောင်းတွေကို ပြောပြတဲ့ Contents တွေဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်..
၂. Creative ဖြစ်တဲ့ contents တွေဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒီ contents တွေကို မြောက်မြားစွာသော channels တွေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Targeted Customers တွေဆီရောက်အောင် ပို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်.
၃. ကိုယ်မပေးနိုင်တဲ့ service တွေ product တွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ contents မျိုး အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းတွေ ရေးထားတဲ့ contents မျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်..
၄. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Contents တွေရေးတဲ့နေရာမှာ ပြီးပြီးရော ရေးထားတဲ့ Contents မျိုးမဟုတ်ပဲ quality မြင့်တဲ့ effort တစ်ခုထုတ်ထားတဲ့ contents မျိုးတွေ ဖြစ်အောင် သတိပြုသင့်ပါတယ်…
ဒီအချက်တွေကတော့ content marketings လုပ်တဲ့နေရာမှာ business တွေ agency တွေအနေနဲ့ မဖြစ်မနေလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်.. စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးသိရှိတဲ့အချက်အလက်တွေရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်.. အားလုံးပဲ အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်.. အားလုံးပဲ creative ဖြစ်တဲ့ contents တွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်..